DEG-DEG: Ciro Immobile Oo Ku Guuleystay Abaalmarihana Kabaha Dahabka Ah Ee Gool Dhalinta Yurub & Mida Serie A Kahor Kulamada Caawa - Gool24.Net
DEG-DEG: Ciro Immobile Oo Ku Guuleystay Abaalmarihana Kabaha Dahabka Ah Ee Gool Dhalinta Yurub & Mida Serie A Kahor Kulamada Caawa
Weeraryahanka kooxda Lazio ee Ciro Immobile ayaa si rasmi ah ugu guuleystay labada kab dahab ee gool dhalinaha horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da iyo mida guud ahaan horyaalada qaarada Yurub ee European Golden Boot.
Immobile ayaa tartanka ugu adag kala kulmayay hoggaanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo kahor kulamada ay la kala ciyaarayaan kooxahoodu Napoli iyo AS Roma caawa.
Haddaba, sababta uu Immobile u hantay labada kab dahabood kahor ciyaaraha caawa ayaa ah in Cristiano Ronaldo gabi ahaanba laga reebay liiska xiddigaha kooxdiisa Juventus ee kahor tagaya caawa Roma.
Immobile ayaa haatan leh 35 gool waxaana uu afar gool ka sarreeyaa Cristiano Ronaldo, walow waxkasta laga filan karayo Ronaldo oo hore wacdarro usoo dhigay haddana tababare Maurizio Sarri ayaa go’aansaday inuu u nasiyo UEFA Champions League
Dhinaca gool dhalinta Yurub, Immobile ayaa dhawaan dhaafay hoggaankana ka qabtay xiddiga Bayern Munich ee Robert Lewandowski oo 34 gool hoggaanka kusoo hayay.
Inay dhammaadeen horyaaladii waaweynaa ee Premier League, La Liga, Ligue 1 iyo Bundesliga isla markaana caawa lasoo af-meerayo Serie A ayaa sheegaysa in Ciro uu kaliya wakhtigu ka xigo inuu jeebada ku rito markiisii ugu horreysay abaalmarinta gool dhalinta Yurub.
Dabcan waxa ay u noqon doontaa Immobile markii saddexaad ee uu ku guuleysanayo gool dhalinta horyaalka Serie A, waxa uu u baahan yahay hal gool si uu caawa u gaadho rekoodhka 36-ka gool ah ee abid ugu badan ee lagu qaaday gool dhalinta Serie A oo uu haysto Gonzalo Higuain.
Arrinta xiisaha leh ayaa ah inuu caawa Immobile wajahayo kooxdii uu Higuain rekoodhkaas ku dhigtay ee Napoli isla markaana ay magaalada lagu ciyaarayo ee Naples tahay halka uu dhalasho ahaan kasoo jeedo Immobile qudhiisu.